Uyisebenzisa kanjani iVenkile yokuKhanya ye-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 254
Uninzi lwezicelo ezifumaneka kuthungelwano lwasentlalweni zinika ujongano olupheleleyo, kunye nemisebenzi efanayo nohlobo lwewebhu, Kwaye babonelela ngokusebenza akufumaneki kwiqonga ledesktop.
Kwimeko ye-Instagram, ezinye izixhobo zayo azifumaneki kwiwebhu, kuba kuya kufuna izinto zekhompyuter ezinokubonelelwa siselfowuni. Owona mzekelo ubalaseleyo sisakhono sokwenza amabali okanye reels ngokukodwa kwiApp.
Nangona kunjalo, kukho izixhobo ezingenayo ngokwaneleyo i-RAM okanye iROM iimfuno zokubamba zonke izicelo ofuna ukuzisebenzisa. Kwiimeko ezinje ngezi, iinkampani zonxibelelwano zentlalo ziphuhlise iinguqu ezilula zeApp yazo epheleleyo, enemisebenzi embalwa, kodwa enobunzima obuncinci kunye neemfuno zenkqubo.
Inguqu ekhanyayo yeApp ikuvumela ukuba wenze uninzi lwezinto ezisebenzayo ze-Instagram, kodwa ikwancamile ezinye ezibaluleke kakhulu. Ubunzima besicelo bufikelela kwi-2 megabytes ngokuthelekiswa nee-megabytes ezingama-34 zenguqulo epheleleyo.
Ujongano lufana kakhulu neApp epheleleyo. Xa ungena ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, uya kubona umgca wexesha, kunye namabali abalandeli bakho phezulu kunye nebar ye icon ezantsi kwesikrini. Kwindawo ephezulu yasekhohlo uya kufumana i icon emile ngohlobo lotolo ukufikelela kwicandelo lemiyalezo.
Kwelinye icala, amacandelo oqwalaselo afingqiwe ngohlobo olukhanyayo. Awuyi kuba nakho ukufaka imisebenzi yabucala okanye utshintshe umxholo wesicelo, esingagqibekanga kumxholo omhlophe.
Izithuba kwi-Instagram Lite
Ezinye izithuba zicinezelwe kwi-Instagram Lite. Unokwenza kuphela ukutya okuqhelekileyo okanye ukupapashwa kwemifanekiso okanye iividiyo eziya kubakho kwiprofayile yakho. Ngokunjalo, unokwenza amabali. Ke ii-reels kunye ne-Instagram TV ziyacinezelwa.
Inkqubo yahlukile kancinane
Ukuqala upapasho, kuya kufuneka uye kwi icon ngophawu lokudibanisa (+), embindini we icon yebar esezantsi.
Nje ukuba i icon icinezelwe, uya kuba kwimbonakalo yekhamera yangasemva, onokuyitshintshela kwikhamera yangaphambili kwi icon esezantsi ekunene. Ungacinezela iqhosha elisezantsi ukuthatha ifoto.
Ungacinezela i icon ezantsi ekhohlo ukufikelela kwigalari yakho ifowuni uze ukhethe umfanekiso.
Unokukhetha umfanekiso omnye ngexesha, ngokungafaniyo nohlobo olupheleleyo. Uya kuya kwimenyu yokuhlela, apho unokukhetha kuphela phakathi kweefilitha ezilithoba kunye nokutshintsha imeko yomfanekiso.
Cinezela ngokulandelayo, ukubhala inkcazo kumfanekiso, khetha indawo kwaye ukhethe ukwabelana ngamanye amaqonga.
Ke yonke eminye imisebenzi yokuhlela ikhubazekile. Awuyi kuba nakho ukubhala kwimifanekiso, wenze ikholaji, phakathi kwezinye ezininzi.
1 I-lite ye-Instagram
2 Izithuba kwi-Instagram Lite
3 Inkqubo yahlukile kancinane